Elman Fc Vs Muqdisho City Club Kulanka Caasimada & Wax Waliba aad ugu baahan tahay kulankan – Gool FM
(Soomaaliya) 26 Juunyo 2019. Kooxaha Elman Fc Iyo Muqdisho City Club ayaa galabta ku balansan garoonka Banadir Stadium ee Degmada Cabdicasiis, Ciyaar qeyb ka ah Horyaalka Somali Premier League.
Kulanka ugu taageeryasha Badan ayaa dhici doona galabta waa ciyaarta loo magac bixiyay Derby Capital ama kulanka Caasimada,labadan kooxod waxey yihiin kuwa isla xisaabtama marka ay timaado kubadda cagta.
Tani waa ciyaarta mideysa labada taageerayal ee kooxaha maadama garoomada lagu arko marka ay dheelayan kooxahan buur ay wata taageeryasha labadan dhinac iyo sawaxan aan xad laheyn, waana sabata aan u dhahay kulanka ugu weyn horyaalka.
Marka ay timaado kulankan waxaa jira xidigo waa weyn oo lagu xasuusto balse hada aan qeyb ka aheyn labada dhinac waxaana kamid ah, Mustaf France, Babaay, Sacad Saalax, C/raxmaan Baladweyne, Yaasiin, Goolhaye Gaatamow,Cabdilaahi Dheere iyo magacyo kale.
Shantii kulan ee ugu dambeysay ay labadan kooxod isku arkan horyaalka waxaa saddex kamid ah badisay naadiga Muqdisho City Club sido kale hal kulan oo qura aye adkaatay naadiga jaalayasha ee Elman halka kulan kale ay ku kala baxeyn bar baro labada dhinac.
Kooxda Muqdisho City Club kulankan waxaa dhaawac ugu maqnaanayo xidigeeda lagu magacaabo Abuukar sido kale waxaa kaar jaalooyinka ku seegaya ciyaaryahanka Daahir kaas oo 3-jaalo u aruurtay.
Sido kale Muqdisho City Club waxey galabta dib u heli doonta adeega xidigeeda daafaca ugu ciyaara ee Baanu kaas oo ka maqnaan kooxdiisa kulamadii ugu dambeyay ay dheesho kooxdiisa.
Naadiga jaalayasha ee Elman kulan ciyaareedkan waxaa shaki laga galinaya xidiga Nuur Tow Tow kaas oo ay macquul tahay inuu seego ciyaartan weyn.
Elman kulankii ugu dambeyay waxey bar baro la soo gashay kooxda Jazeera Sports Club kadib markii ay ku kala baxeyn 2-2, halka Muqdisho City Club ay bareejo ka soo qaadatay wiilasha Madbacada Qaranka.
Xidiga lagu magacaabo Daadir Aamiin Cali (Daada) ayaa galabta ka hor imaan doona kooxda uu waqtiga badan la soo qaatay ee Muqdisho City Club isago iminka xiran maaliyada jaalayasha ee Elman.
Sido kale Daadir ayaa kulamadii ugu dambeyay saaxiib la ahaa shabaqada isago kooxdiisa Elman 2-gool u dhaliyay kal ciyaareedkan.
Kooxda Elman ayaa ku jirta kaalinta 4-aad ee horyaalka iyago leh 28-dhibcood halka Muqdisho City ay fadhiso booska 5-aad iyado leh 25-dhibcood, hadii ay Muqdisho City Club ay ka adkaato Elman waxey soo fariisan doonta booska 4-aad oo Elman ku jirto balse Elman oo adkaato waxey noqoneysa ine gasho booska 3-aad oo hada ku jirta Heegan.
25/11/2016 Elman FC 1 : 2 Mogadishu City Club
24/03/2017 Mogadishu City Club 0 : 1 Elman FC
Kooxaha: Elman Fc Vs Muqdisho City Club
Kulanka: Derby Caasimada
Jawiga Garoonka: 29° /25°C
W.D Cabdifitaax Nani
Maxey tahay ballanta la sheegay in Roman Abramovich uu ka qaaday Frank Lampard - Maxaase ka dhiman heshiiskiisa?
RASMI: Kooxda Barcelona oo mid ka mid ah xiddigaheeda ka iibisay koox ka dhisan horyaalka Premier League.